OPPO A5 (2020) iyo A9 (2020) waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
OPPO A5 (2020) iyo A9 (2020) waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Eder Ferreño | | Aaladaha Android, Mobiles
OPPO waa sumad ballaadhinaysa joogitaankeeda suuqa Yurub. Shirkaddu waxay hadda ku dhawaaqeysaa inay soo saartay laba ka mid ah telefoonnadeedii ugu dambeeyay ee ku dhex yaal bartamaha Spain. Laba moodel oo wax walba leh si ay si fiican ugu qabtaan qaybtan suuqan, halkaasoo sumcadda Shiinaha ay doonayso inay ku kasbato joogitaankeeda, maxaa yeelay waa qayb muhiim ah.
Labadan nooc ayaa ah OPPO A5 (2020) y A9 (2020). Kuwani waa laba qalab oo waxay la baxeen dareen wanaagsan soo bandhigiddooda, markaa waxaa jiray xiiso in la arko haddii astaantu ay bilaabeyso iyaga iyo in kale Yurub, maadaama maalintoodii kaliya lagu soo bandhigay Aasiya. Ugu dambayntii waxay yimaadeen Spain.
Naqshadeynta ayaa isku mid ah labada taleefan, oo leh qaab muuqaal ah dhibic biyo ah, xoogaa oval ah kiiskan. Waxay u oggolaaneysaa jaantusyada inay khafiifayaan oo taleefanka hore ee taleefanka ayaa si wanaagsan uga faa'iideysanaya. Labada noocba sidoo kale waxay nooga tegayaan dhowr kaamirooyin gadaal ah (3 marka laga hadlayo A5 iyo 4 midka kale) iyo aaladda sawirka faraha ee ku taal xagga dambe.
1 Qeexitaannada OPPO A5 (2020)
2 Qeexitaannada OPPO A9 (2020)
Qeexitaannada OPPO A5 (2020)
Nooca ugu horeeya ee ay soo bandhigaan sumcadda Shiinaha ayaa ah kan OPPO A5 (2020), oo ah kan ugu fudud labadan taleefan ee ay innaga tageen. Moodel caan ah oo dhex-dhexaad ah, taas oo ka sarreysa dhammaanba kamaradahaheeda. Guud ahaan, waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u miisaaman qaybtan suuqan ah. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Shaashad: 6,5 inji oo leh HD + Xallinta (1.600 x 720 pixels)
Kaydinta Gudaha: 32/64 GB (Kordhinta micro SD ilaa 256 GB)
Kaamirada gadaal: 12 MP leh aperture f / 1.8 + 8 MP oo leh aperture f / 2.25 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4
Kaamirada hore: 8 MP oo leh f / 2.0 aperture
Batariga: 5.000 mAh
Nidaamka qalliinka: Android 9 Pie oo leh ColorOS 6.1
Isku xirnaanta: Dual SIM, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, microUSB
Kuwa kale: akhristaha faraha gadaal,
Cabirrada: 163,6 x 75,6 x 9,1mm
Miisaan: 195 garaam
Qeexitaannada OPPO A9 (2020)
Taleefanka labaad ee ay shirkaddu nooga tagtay kiiskan waa kan OPPO A9 (2020). Naqshad kale oo si fiican u la kulanta waxa inta badan isticmaaleyaashu ka raadinayaan bartamaha. Waa qaab isu dheelitiran, oo qeexitaanno wanaagsan guud ahaan, gaar ahaan baytari weyn. Inkasta oo ay tahay kamaradaha ay taagan yihiin kuwa ugu badan, oo leh afar dareemayaal kiiskan. Marka waxay ballanqaadaysaa inay si wanaagsan uga shaqeyn doonto arrintan. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Kaydinta Gudaha: 128 GB (Kordhinta micro SD illaa 256 GB)
Kaamirada gadaal: 48 MP leh aperture f / 1.8 + 8 MP oo leh aperture f / 2.25 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4
Kaamirada hore: 16 MP oo leh f / 2.0 aperture
Kuwa kale: Akhristaha sawirka faraha gadaal, ku hadalka af-istiriyoo laba jibaar ah
Labadan taleefan ee ka soo baxa sumadda Shiinaha ayaa durbaba si rasmi ah loogu iibinayaa Spain. In kasta oo xilligan mar horeba laga iibsan karo Amazon, haddana waa in la filayaa in lagu iibin doono meelaha kale ee iibka, labadaba jidh ahaan iyo khadka tooska ah, laakiin hubaal waxay qaadan doontaa dhawr maalmood inay taasi dhacdo. Waxaan rajeyneynaa inay jirto xaqiijin rasmi ah.
OPPO A5 (2020) wuxuu ku bilaabmayaa a qiimaha 199 euro oo ah nooca kaliya RAM iyo keydinta. Taleefanka waxaa lagu heli karaa laba midab oo kala duwan, kuwaas oo kala ah madow iyo caddaan, oo magacyadoodu kala yihiin Mirror Black iyo Dazzling White. Waa labada midab ee aan ku arki karnay soo bandhigideeda rasmiga ah.
Marka laga hadlayo OPPO A9 (2020) waxaan sidoo kale helnaa hal nooc oo RAM ah iyo keyd gudaha ah. Qaabkan waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 269 euro. Waxaa sidoo kale lagu iibinayaa laba midab, oo ah cagaar iyo guduud (kuwa sawirka ka muuqda), oo leh magacyo Space Purple ama Marine Green. Taleefankan sidoo kale waxaa lagu bilaabay Orange.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OPPO A5 (2020) iyo A9 (2020) waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Realme X2 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Nofeembar cusbooneysiinta amniga ee qaybta Pixel hadda waa la heli karaa